AU: ''DF Waan la shaqeynaynaa''
24 Nov 24, 2012 - 7:49:21 AM
AMISOM ayaa sheegtay inay la shaqeynayso Dowlada cusub ee Somalia, waxayna sidoo kale soo dhaweeyeen Golaha Wasiirada ee Tirada yar, isago sheegay inay taasi calaamad u tahay guusha ay gaartay Somalia.
Shir jaraa'id oo Afhayeenka AMISOM uu maanta 24 November,2012 ku qabtay xaruntooda Muqdisho ayuu ku sheegay inay kala shaqeynayaan DF sidii nabada dalka looso celin lahaa, isagoo shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada dowlada.
"Waxaanu soo dhaweynaynaa in Somalia ay ka baxday xiligii meel ku gaarka ahaa, waxaana AMISOM ahaan naga go'an inaan dowlada cusub ula shaqeyno si dhow inagoo eegayna danta shacabka Soomaaliyeed oo ah in nabad la helo" ayuu yiri Col. Cali Aadan Xumud.
Afhayeenku wuxuu hadalkiisa ku daray in Ciidamadooda iyo kuw DF ay ka shaqeyn doonaan sidii ay isugu furi lahaayeen Gobolada dalka, Sidoo kalena ay xoojinayaan dagaalka ay kula jiraan Al-shabaab oo uu ku sheegay koox aan doonayn nabad ka dhalata Somalia.
Col. Xumud ayaa shirkiisa jaraa'id ku sheegay in Mas'uuliyinta Howgalka AMISOM ay soo dhaweynayaan xukuumada cusub ee la ansixiyay, iyagoo Wasiirada 10 xubnood ka kooban ku sheegay inay qayb ka tahay Guusha ay Somalia gaartay.
Mar uu ka hadlay Amaanka Deegaanada ay AMISOM iyo DF kala wareegeen Al-shabaab ayuu ku sheegay inay yihiin kuwo wanaagsan, isagoo si gaar ah u xusay inay xooga saarayaan sidii Amaanka Muqdisho lagu xasilin lahaa.
"Waxaan ka codsanaynaa shacabka Soomaalida inay gacan nagu sii yaan sidii aan uga hortegi lahayn kuwa nabad diida. Waayo waxaa muuqanaysa in kuwaasi ay isku dhex-dhuumayaan shacabka, sida keliya ee lagu qaban karana waa inay shacabku la shaqeeyaan ciidamada" ayuu yiri Afhayeenka AMISOM.
Ugu dambeyn Col. Xumud wuxuu sheegay in Ciidamadooda oo kaashanaya kuwa DF ay ka go'an tahay inay dalka oo dhan ka saaraan Ururka Al-shabaab oo uu sheegay inay yihiin kuwo aan ogolayn inay nabadgalyo ka dhacdo dalkan ku yaala Geeska Afrika.